विश्वका सबैभन्दा धनाढ्य १० फुटबल क्लब मालिकहरु, कसको सम्पत्ति कति ?
विश्वमा केही यस्ता धनाढ्यहरु रहेका छन् जो फुटबल खेलको निकै सौखिन रहेका छन् । कतिपय धनाढ्यहरु एउटै देशको मात्र नभइ अन्य राष्ट्रमा पनि फुटबल क्लब किन्ने गरेका छन् । फुटबल क्लबको मालिक हुनु धेरै नै सानदार र जिम्मेवार हुन्छ कुरा हो जुन सौभाग्य सबैले पाँउदैनन् । आज हामी विश्वका १० धनाढ्य फुटबल क्लब मालिकहरुको बारेमा जानकारी दिँदैछाै।
१०. जोए लेविस (टोटेनह्याम हटस्पर्स)
चार अर्ब ८० करोड युरो सम्पति भएका बेलायती व्यावसायी जोए लेविस यो सूचीको दशौँ स्थानमा रहेका छन् । टोटेनह्याम हटस्पर्स को अध्यक्ष लेविस उनको निजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी टेभिस्टक ग्रुपकामुख्य लगानीकर्ता पनि हुन् । ह्वाइट हार्ट लेन उनको लागि घर नजिकै भने छैन किनभने उनी अहिले बाहामास मा बस्ने गर्छन् । टोटनह्यामलाई लिग उपाधि जिताउन उनले बर्षेनी मिलियन पैसा लगानी गर्ने गरेका छन् । केही वर्षयता स्पर्सको खेलले पनि यो प्रमाणित गरिदिएको छ । लिगमा अन्य प्रतिष्ठित क्लबलाई चुनौती दिदै टोटनह्यामले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ । लेविसले टोटनह्यामलाई एउटा नयाँ उचाइ दिन खोजेको र प्रतिष्ठित उपाधिहरु जित्न लगानी गर्दै आइरहेका छन् ।
९. साहिद खान (फुलह्याम एफसी)
यी मानिस पाकिस्तानमा जन्मेका हुन् । उनी १६ वर्षको उमेरमा अमेरिका गएका हुन् । उनले त्यसपछि रेष्टुरेन्टमा भाँडा माझ्न सुरु गरेका हुन् । अहिले उनीसँग पाँच अर्ब ४० करोड युरो बराबरको सम्पति छ । उनको मुख्य गरि फ्लेक्स एन गेट नामको कम्पनी छ जसले कार पार्ट्सहरुको कारोबार गर्छ । उनको यति धेरै सम्पति भए पनि फुलह्याम दोस्रो श्रेणीको लिगमा खेलिरहेको छ ।
८. सिल्भियो बर्लुस्कोनी (एसी मिलान)
उनको लागि कुनै परिचयको जरुरी नै छैन किनभने पुरै विश्वले सिल्भियो बर्लुस्कोनीलाई चिन्छ जो सन् १९८६ देखी नै एसी मिलानको अध्यक्ष भएका हुन् । विश्कै एक महत्वपूर्ण मिडिया कम्पनी मिडिया सेटको समेत अध्यक्ष उनको पाँच अर्ब ६० करोड युरो बराबरको सम्पति रहेको छ ।
रियल स्टेटबाट एकाएक सफताको सिडी चढेका उनले राजनीतिमा पनि उस्तै सफलता पाएका थिए । फुटबल खेलमा विशेष रुची राख्ने बर्लुस्कोनीले हालसम्म एसी मिलानमा धेरै लागनी गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय एसी मिलानको अवस्था राम्रो रहेको छैन । इटालियन लिगमा युभेन्ट्सको दबदबा रहेको छ । आफ्नो हराएको सान पुन प्राप्त गर्न बर्लुस्कोनी नयाँ रणनीति बनाइरहेका छन् । उनले चिनियाँ धनाढ्यहरुसँग मिलेर क्लबमा लगानी गर्न लागेका छन् ।
७. रोमान एब्रामोभिच (चेल्सी)
यी रसियन धनाढ्य सन् २००३ मा आफ्नो तेलको पैसा खर्च गरेर चेल्सीको मालिक भए पछि लण्डन क्लबको इतिहास नै बदलियो । उनको ६ अर्ब ९० करोड युरो बराबरको सम्पतिले उनलाई नाम चलेका फुटबल खेलाडी किन्न मद्धत गर्यो जसकारण क्लब सन् २०१२ को च्याम्पियन्स लिग जित्न सफल भयो । उनी चेल्सी क्लबको मालिक भएपछि ४ पटक प्रिमियर लिग उपाधि जित्न सफल भएको छ । खेलमा कुनै पनि कमी देखेमा उनी प्रशिक्षकहरु बर्खास्त गर्न पछि पर्दैनन् । उनले बर्खास्त गर्नेमा विश्व चर्चीत प्रशिक्षकहरु जोसे मोओरिनो, कार्लो एनलकोटी, एन्ड्री डि भिल्ला बोस, एभाज्ट ग्राम रहेका छन् ।
६. स्टेन्ले क्रोयन्के (आर्सनल)
उद्यमी तथा क्रोयन्के स्पोट्र्स इन्टरप्राइजेजका यी मालिक ठूला खेल प्रेमी हुन् । ७ अर्ब युरो बराबरको सम्पति भएका उनी एनबिएमा डेनभर नगेट्स, एमएलएस माकोलोराडो र्यापिड्स र एनएफएलमा कोलोराडो एभालान्च र एनएफएलमालस एन्जल्स र्याम्सको समेत मालिक हुन् ।
५. डिमित्री राइब्लोभ्लेव (एएस मोनाको)
यी रसियन धनाढ्य पनि क्रोयन्के जस्तै फुटबलका धेरै ठूला फ्यान हुन् । उनी‘डिभोर्स अफ द सेन्चुरी’को कारणले पनि चिनिन्छन् जसले आफ्नो पुर्व श्रीमतीलाई डिभोर्स दिनको लागि मात्रै चार अर्ब युरो तिरेका थिए । उनी म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई किन्न चाहान्थे तर यो सम्भव भएन । उनको अहिले आठ अर्ब पचास करोड युरो बराबरको सम्पति रहेको छ ।
४. फिलिप अन्सुज (एलए ग्यालेक्सी)
एलए ग्यालेक्सीका मालिक अमेरिकाकै धनीमध्ये एक मानिस हुन् । उनको आठ अर्बअसी करोड युरो बराबरको सम्पति रहेको छ जुन उनले रेलवे र तेलको व्यापारबाट कमाएका हुन् । फिलिप एनएचएलमा लस एन्जल्स किंग्सको पनि मालिक हुन् ।
३. डेटिच माटेसिज (एनवाइ रेड बुल्स)
यी अष्ट्रेलियनकोे बैंक खातामा १२ अर्ब युरो रहेको छ जो रेडबुलका संस्थापक पनि हुन् र उनको क्लबको नामपनि त्यसैबाट राखिएको छ । यसका साथै उनको फर्मूलावान रेसिङ टिम पनि छ जसको नाम रेड बुल रेसिङहो ।
२. फ्रान्कोइस पिनल्ट (स्टेड रेनाइस)
स्टेड रेनाइसका मालिकको ६० वटा कम्पनी रहेको व्यापार साम्राज्य रहेको छन् जसमा पुमा, गुची, वाइभेस सेन्ट लरेन्ट लगाएतका प्रख्यात ब्रान्डहरु पनि पर्छन् । उनको १५ अर्ब युरो बराबरको सम्पति रहेको छ तर उनको अघि ठूलो चुनौती छ किनभने स्टेड रेनाइस लिग वानमा ५ औं स्थानमा रहेको छ ।
१. सेख मन्सुर (म्यानचेस्टर सिटी)
म्यानचेस्टर सिटीका सेख विश्वकै धनी मानिस मध्येका एक हुन् । उनको पुरा नाम मन्सुर विनजायद विन सुल्तान अलनाह्यान हो । उनी अबुधावीका शासक परिवारका सदस्य हुन् । युएईका राजनैतिक व्यक्तित्वका साथै उनी भर्जिन ग्यालाक्टिक र स्काई न्युज साउदी अरेबियाका पनि मालिक हुन् जसको कुल सम्पति २६ अर्ब युरा बराबर रहेको छ । उनले म्यानच्यास्टर सिटी क्लब किनेपछि क्लबमा धेरै पैसा लगानी गरेका छन् । बितेका ६ वर्षमा उनको क्लबले दुईपटक प्रिमियर लिग जित्न सफल भएको छ ।